Kunyange paine zviuru zvemitambo inogona kutambwa pairi PS5 kuburikidza PS5 yekudzokera kumashure kuenderana, zvishoma zvishoma zvakagadzirirwa chaizvo simba nyowani raSony. Takatora mitambo yakanakisa yaunogona kutamba paPS5 nhasi uye tovapatsanura nerudzi kuitira kuti iwe ugotarisa zviri nyore izvo zvinonyanya kukufadza. Kubva kuRPGs kune mitambo yevakawanda uye yemahara-kutamba, isu takufukidza.
Nezvinangwa zvechinyorwa ichi, isu takaedza kunamatira nemitambo ichangoburitswa neshanduro dzePS5 kana mitambo yakagadziridzwa kuti ishandise simba rayo rekuwedzera. Ziva chokwadi, hachisi chinyorwa chakazara che chinhu chose inowanikwa pahurongwa izvozvi. Nezve izvo, iwe uchazoda kutarisa iyo yakanakisa PS4 mitambo. Sezvo mimwe mitambo ichiburitswa mumwedzi iri kuuya, isu tichazobuda uye kuwedzera mamwe mapoka.
Akanakisa PS5 RPGs
Mitambo-yekutamba mitambo yakamirira muyedzo wenguva uye inoramba iri mimwe inozivikanwa kwazvo pamusika. Iko hakuna tani yeRPGs yakagadzirirwa PS5 panguva ino, asi iwo mashoma ayo akakodzera nguva yako. Uye kana izvo zvisina kukwana iwe, iyo PS4 ine rakakura rekumashure katarogu reRPGs kuti ushandise.
Pakutanga yakagadzirwa naKusoftSoftware, Midzimu yeDhimoni yaive yekutanga ya2009 yeMweya Yemweya, iyo yaizoenderera ichisvetuka mhando yese yeMweya-inoda. Gara muHumambo hweBoletaria, vatambi vanotanga rwendo rwekukunda Mambo Allant, uyo akamutsa huipi hwekare neuto remadhimoni. Sezvaunogona kutarisira, kurwa muMweya yeMadhimoni kwakanyanya kunetsa, uye hapana akaomesesa marongero ekuiramba. Iwe "git gud" kana kufa unoyedza. Kudzokorora nekudzokorora.
Bluepoint inogadzirisazve Mweya yeMadhimoni seye PS5 yekumisikidza zita, uye kutariswa kwenyaya kunoonekwa pachena. Ipo ichiramba yakatendeka kuchiratidzo chekutanga, magiraidhi ayo akawedzeredzwa kuzadzisa zviyero zvemazuva ano. Iine mamwe emhando-e-ehupenyu magadziriso uye diki shanduko pano neapo, Bluepoint yakavimbisa kuti yakasiya chero chekare jank munguva yakapfuura. Chinosara chiyeuchidzo chakanakisa, pamwe ndechimwe chezvakanyanya kumboitwa. Iyo yakawanda chiito-RPG pane yakatwasuka-kumusoro RPG, asi ichiri kukodzera bhiri.
$ 50 paWalmart
Midzimu yeMweya yeDhimoni yakashamisa munhu wese uye pakarepo ikave muenzaniso wemutambo remake wakaitwa nemazvo. Bhura pahunyanzvi hwako hwekurwa nekuti chiitiko chichava kusakanganwira.
Kutanga sechiito / chiitiko chekunyepedzera chinoteedzana, Assassin's Creed yakamonyoroka yakazara RPG yakazara nezvakango nyorwa seOrigin uye Odyssey. Yayo yazvino mainline mutambo, Assassin's Creed Valhalla, yakapetwa pasi ichitowedzera uye inoita kuti vatambi vararame kunze kwavo kweViking fungidziro muEngland mukati meNguva yeRima. Nekugara kukakavara kuchiparadza Norway, gamba redu rinoenda nechikepe kumahombekombe eEngland, asi mambo wazvino uye vagari vacho havasi ivo vane mutsa kune ava vatorwa.
Vatambi vane sarudzo pakati pemurume kana mukadzi Eivor, ese ari maviri anogona kugadziridzwa nematoto akasiyana uye magadzirirwo ebvudzi. Kufanana nevatangiri vayo, Valhalla inobvumira vatambi kuti vagadzire bevy yezvombo, kusanganisira sarudzo kune vaviri-kushandisa mawoko maviri. Kune zvakare kune hombe, bazi rebazi remuti uye anopfuura gumi nemaviri ekugona kuvhura. Hapana maEivor maviri achave akafanana, saka zviite kuti zvive zvako kune yako yekutamba uye wotanga kurwisa.
Assassin's Chitendero Valhalla PS5
$ 30 ku Amazon
$ 60 pa Best Buy
$ 37 paWalmart
Chero ani zvake anogona kuve Assassin, kunyangwe mudiki weViking raider ari kutsvaga kubwinya uye kukudzwa. Tora munondo wako uye nhoo uye gadzirira chiitiko chinonakidza.
Iyo Nioh Unganidzo
Iyo Nioh Unganidzo ine yakagadziriswazve edhisheni yeese wekutanga uye wechipiri mutambo mune yekuita-RPG akateedzana. Nioh anotevera samurai yeIrish muJapan mukati memakore ekuma1600 (kunyangwe iri fungidziro yechinyorwa chayo), ine Gameplay yakafanana neiyo yeMweya Yemweya. Nioh 2 prequel inoitika munguva yekupera kwema1500 inotarisa hafu-yokai, dhimoni reJapan, richishanda kutora pasi murwi wehondo Toyotomi Hideyoshi.
Mitambo miviri iyi inotsigira resolution ye4K pa120FPS inoshamisa, mamwe mashoma mazita anotsigira akanyanya mafuremu mitengo. Imwe neimwe inouyawo nezvose zvikuru DLC, zvitanhatu zvekuwedzera. Kunge mimwe mitambo irikugadziridzwa yePS5, ivo vanotsigirawo zvinhu zveDualSense senge haptic mhinduro uye zvinogadzirisa zvinogadzirisa.
SaRima Remweya kana Sekiro? Iwe uchazoda kutarisa iyo Nioh akateedzana. Iine muunganidzwa wayo paPS5, unogona kuwana ese ari maviri mitambo uye ese DLC munzvimbo imwechete uye utambe pane 4K resolution.
Yekupedzisira Kufungidzira 7 Remake Kupindirana
Paunofunga nezveJRPGs, imwe yeanonyanya kuratidza uye anozivikanwa akateedzana anouya mundangariro ndeye Final Fantasy. Square Enix yakasarudza kuendesa kune vateveri zvishuwo uye kugadzirisa Remangwana Yekufungidzira 7, iyo vazhinji vanoiona seyakanakisa kupinda muiyo franchise. Remake yayo yaive yakatanhamara, uye yakazongoitwa nani paPS5 apo Yekupedzisira Kufungidzira 7 Remake Kupindirana yakaburitswa. Kwete chete iyo yaisanganisira iyo PS5 optimizations, asi zvakare yakawedzera imwe inonakidza DLC nyeredzi Yuffie.
Chero ani RPG fan ane chikwereti kwavari kutamba Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Iyo inochengetedza zvese izvo zvakagadzira iyo yepakutanga zvikuru kwazvo ichizvivandudza kune vateereri vanhasi neine nyowani Gameplay mechanics. Iyo yakaoma feat kuti ibudirire kana iyo bhalanzi iri yakaoma, uye Square Enix yakaita kuti iratidzike nyore.
$ 60 ku Amazon
$ 64 pa Best Buy
$ 70 paWalmart
Remakes haigone kuwana zvirinani kupfuura izvi. Zvinogona chete kuve chikamu chekutanga cheanodiwa echinyakare, asi Final Fantasy Remake Intergrade yaive chiitiko chinonakidza kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, yakakwana kune vateveri vatsva nevakuru zvakafanana.
Yekupedzisira Kufungidzira 14 Pamhepo
Yekupedzisira Yekufungidzira 14 Online yaive neyakaomarara budiriro yekuita uye kuvhura, asi inozopedzisira yave mutambo wakakodzera kutamba muna 2021. Mumwedzi ichangopfuura, yakatotorwa paWorld of Warcraft mukuzivikanwa, chinova chipupuriro chetsigiro yakatambirwa nemutambo pamusoro pe makore. Kuuya kwayo Endwalker kuwedzera kwakatemerwa kuburitswa munaNovember 2021, saka iwe uchazoda kupinda muchiito zvisati zvaitika uye gadzirira.
Kunyangwe kuve kwekutanga kutenga madhora makumi matanhatu, vatambi vachazoda kubhadhara pamwedzi kubhadhara mari kuti varambe vachiwana Yekupedzisira Yekufungidzira 60 Online mushure memazuva makumi matatu ekutanga. Nhengo dzinotanga pa $ 14 pamwedzi uye dzinokwira kusvika ku $ 30 pamwedzi, nekuwana mavara masere pane sevha. Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe haudi nhengo yePlayStation Plus kuti uitambe paPS12.99 kana PS14.99.
$ 60 paPlayStation
Yekupedzisira Yekufungidzira 14 Online iri kubhadhariswa sePasirose yeWarcraft mhondi sekupedzisira. Iyo inozivikanwa MMORPG yakagadziridzwa yePS5 uye inoratidzira akati wandei akakosha ekuwedzera. Ingova wakagadzirira kubhadhara pamwedzi kubhadhara mari kana iwe uchida kuramba uchinakidzwa nayo.
Yakanakisa Mitambo yePS5 / Yekushanya
Kuita / kudakadza kunogona kureva zvinhu zvakawanda kune vanhu vakasiyana, kunyanya kana iyo genre ichigara ichikwereta kubva kune vamwe. Zviri nyore kutsanangura Assassin's Creed Valhalla sechiito RPG, semuenzaniso. Chero zvingave zviripo, zviito zvekushanya / zvekushambadzira zvinoumba huwandu hwemusika weAAA nhasi kunze kwevapfuri, uye kune akawanda makuru paPS5.
Ratchet uye Clank: Simudza Kunze
Ratchet uye Clank: Simudza Kunze iri nyore imwe yeakanakisa zvinyorwa mu franchise kusvika zvino. Iyo yakareba-inomhanya nhevedzano kubva kuInsomniac inoratidzira Lombax inonzi Ratchet achirwa nehuipi padhuze narobhoti shamwari yake Clank. Rift Apart inounza mamwe mavara matsva mudanga rakafanana naRivet, muratidzani waRatchet murwi werusununguko anorwisa akaipa Emperor Nefarious.
Kana Clank zvipo Ratchet aDimensionator mune tarisiro yekuti iye anowana mamwe maLombaxes, zvinhu zvinokanganisika uye zvinopera mune imwe nzvimbo. Mukuongorora kwedu mutambo, isu takati, “Ratchet naClank: Rift Apart iri gore rino zhizha blockbuster paPS5. Kutora vatambi kuburikidza nenyika dzakasiyana uye dzinoyevedza nehondo yakanakisa uye chikuva, Rift Apart inonakidza kutamba. ”
Ratchet uye Clank: Rift Apart Launch Chinyorwa PS5
$ 69 ku Amazon
$ 69 paWalmart
Tamba saRatchet kana Rivet mune ino dhizaini yekukwiridzira nhanho apo iwe uchiedza kumisa Chiremba Nefarious pakuparadza akasiyana siyana. Neshamwari dzako padivi pako, hapana chausingakwanise kuita.
Insomniac's Spider-Man yakaburitswa makore mashoma apfuura, uye iwe uchave wakamanikidzwa kuwana iri nani gamba mutambo. Iyo inogara kumusoro kumusoro padivi neBatman Arkham akateedzana sevanhu vazhinji vanofarira. Sezvo Insomniac akairovera kunze kwepaki, zvaingoitika chete kuti zvaizo teedzera. Spider-Man: Miles Morales haisi kuteedzana kuzere, asi chiitiko chakamira chakagadzika munzvimbo imwechete mushure mezviitiko zvemutambo wekutanga.
NaPeter Parker pazororo, Miles Morales anotora jasi renharaunda ine hushamwari yeNew York Spider-Man. Kana Harlem ikauya ichirwiswa nekambani yemagetsi gehena pakuparadza guta kuti riwane purofiti, Miles anokodzera kuvaburutsa pasi nerubatsiro rwevamwe shamwari. Guta rinotsvagisa zvizere uye rinoratidza masutu matsva, hunyanzvi, uye zviitiko zvekupedzisa.
$ 50 pa Best Buy
$ 48 paWalmart
Thwip uye fambisa nzira yako kuyambuka guta, uchiita mabasa ako seanodiwa munhu wese gamba. Zvinotora zvese izvo Miles anofanirwa kumisa kutyisidzira kweNew York uye nekuchengetedza guta. Hapana kumanikidza.
Kudzora: Yekupedzisira Shanduro
Iyo weird inotyisa mutambo kubva kuRededy, iyo inosunga muAlan Wake franchise, ine yayo quirks. masimba yakavakirwa muIye Yekare Imba, chivako chine hutsinye icho chinogadzira yakavanzika hurumende agency, iyo Federal Bureau yeKutonga (ndosaka zita racho). Iko pano kuti izvo zvakajairika zvinoitika chaizvo apo iwe uchirwira nzira yako kuburikidza nedzimwe nyika mhandu mune tarisiro yekuwana hama yako.
Kudzora paPS5 kunosanganisira maviri maficha modhi, imwe inosimudzira mashandiro ku60FPS uye imwe inoshandura ray yekutsvaga mhedzisiro pa30FPS. Hazvina mhosva kuti ndeyipi yaunosarudza iwe uri kutarisa iyo 1440p resolution iyo inobuda pa4K. Chii chinotonhorera apa ndechekuti iwe unogona kushandura aya modhi chero nguva iwe yaunoda mune ekuratidzira marongero usinga regedze kunze kwemutambo uye kurodha kubva ku main menyu senge nemamwe akawanda mazita. Seye cherry kumusoro, kurodha muDhiraivhu paPS5 kunotora isingasviki gumi masekondi kazhinji, nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvayaive paPS10.
$ 36 pa Best Buy
Remedy's weird horror title yakava yechinyakare yechinyakare mu2019.Izviitire wega paPS5 ine yakaderedzwa zvakanyanya mutoro nguva.
Asingafi Fenyx Kukwira
Zvichida kuchembera kunzwa Kusingafi Fenyx Kukwira kunonzi Kufuridzira kweMusango dombo, asi fananidzo dzakakodzera. Inotamba seThe Legend of Zelda: Breath of the Wild inosangana naAassassin's Creed Odyssey, vachitora mutambo wemitambo uye dhizaini kubva kune waimbove mutambo uye vachishandisa zvimwe zvengano yechiGreek inoratidzwa mune yekupedzisira. Sanganisa netoni yekuseka uye zvaiita senge zvakafanirwa kubudirira.
Mushure mekunge Typhon apunyuka kubva kuTatarosi nemhiko dzekutsiva kuna vamwari, gamba diki reGreek rinosuka paGolden Isle kuti riwane rakanganisika. Kuti ukunde Typhon nevateveri vake, iwe unozofanirwa kutsvaga vamwari uye uvabatsire kudzoreredza masimba avo azere. Asingafi Fenyx Kukwira inoratidzira nzvimbo dzinoverengeka zvinoenderana nevamwari vechiGreek uye ine yakauraya ngano vavengi kutora. Kwete chete iwe unogona kuchinjisa ako ekurwisa hunyanzvi, asi kune akawanda mapuzzle ekugadzirisa futi.
Asingafi Fenyx Kukwira PS5
$ 33 paWalmart
Tora zvisikwa zvengano uye chengetedza vamwari mune ino epiki yechiGreek ngano. Akafuridzirwa muzvikamu neThe Legend yeZelda uye Assassin's Creed Odyssey, zvinonakidza chose.
Hapana Denga reMunhu raive rakaipa parakatanga ... uye zvadaro rakanga risiri. Iine rutsigiro rwusingaperi uye nemutyairi wekuita kuti mutambo urarame kusvika pazere kugona, Mhoro Mitambo yakashanda usiku nemasikati kuendesa makuru ekugadzirisa zvemukati uye gadziriso yemhando yehupenyu yakavandudza zvakanyanya mutambo. Chasara ndiwo mutambo wakanakisa uyo uchangobva kukwidziridzwa kuPS5 ine vanhu vazhinji, nyika denser, kugadzirisa resolution uye maframu, uye adaptive inokonzeresa rutsigiro.
Kuzvirumbidza zvakasikwa -zvakasikwa zvine mapuraneti anopfuura gumi nemasere (kwete typo), No Man's Sky inobvumira vatambi kuti vaongorore mashura makuru epasi rese. Kubva pamapuraneti ane hukasha ane tembiricha iri kufashaira uye mvura ine asidhi kusvika kune yakanyanya kudziya, mamiriro ekunze, hapana kushomeka kwezvinhu zvekutsvaga. Unganidza zviwanikwa kuti uvake mabheseni uye uwane ngarava dziri nani paunenge uchibhururuka nepakati pematenga.
Kwete Denga reMunhu PS4
$ 30 pa Best Buy
Hapana Denga reMunhu rinogona kunge risina kuburitsa mune yakanakisa mamiriro, asi Mhoro mitambo yakashanda nesimba kuti ive nechokwadi chekuti ikozvino chiitiko chinonakidza zvisingaite. Itambe iyo paPS5 ine yakawedzerwa zvinoonekwa uye makanika.
Iyo Yekutarisa Imbwa nhevedzano yakabva kuChicago ichienda kuSan Francisco isati yapera muLondon yeWatch Imbwa: Legion, iyo inoona vanogadzira vachiita post-Brexit dystopia inotongwa neuto rezvematongerwo enyika (saka, unoziva, hausi kure nehupenyu chaihwo) . Kusanganisa fomura iyi, Ubisoft akaigadzira kuti chero munhu ave mutambi anotamba, kubva kuvachengeti venyuchi kusvika kuna gogo vakuru. Iko hakuna chinhu chakadai seNPC pano. Mhando yega yega hunhu ine yakasarudzika hunhu uye hunyanzvi hwavanounza patafura, zvichibatsira DedSec kubvisa huori mukati meguta.
Kufanana nezvakambopinda mune akateedzana, ese akavhurika-pasirese uye inoratidzira kuwanda kwezviitiko zvekuita uye giya kuvhura. Kugara nevatambi vakawanda, inopa yakawanda nzira yekupedzisa mamishini zvichienderana neyako yekutamba. Kunyangwe iwe uri munhu anokakavara, uchida kuenda mune inoba, kana kumhanya mukupfira pendi pane zvese, unogona kuzviita.
Tarisa Imbwa: Legion PS5
$ 28 ku Amazon
$ 28 paWalmart
Kufamba uchiyambuka padziva uye kubatsira DedSec kutora pasi iyo yekutarisa nyika iyo yamuka mumashure-Brexit London. Ngatitaurei kuva vakatendeseka, hunenge hupenyu chaihwo panguva ino.
Akanakisa PS5 Shooter
Kunyangwe mune wekutanga-munhu kana wechitatu-munhu, pane chimwe chinhu chakakosha nezve yakanaka shooter. Unogona kuuraya madhimoni kubva kugehena, kuparadza uto revatorwa, kucheka magandanga - hapana kushomeka kwezvaunogona kuita uye nezvikara zvaunogona kuuraya. Zvisinei, kana zvakadaro, iwe unozopedzisira wave gamba mune chero eanonakidza mapfura paPS5.
Borderlands 3 ndiyo yazvino uye yakakura kubva kuGearbox Software, ichitora chinzvimbo-chekupfura ichienda kune iyo gwara kune mapuraneti matsva nenzvimbo. Neimwe nzira vachizvikwenya pachavo kubva pane zvavakaburitsa muBorderlands 2, Gearbox rakagadzira pamusoro pebhirioni-inogadzirwa nepfuti ine yakasarudzika mativi uye maficha zvichienderana nechiratidzo chavo. Nyungudika kumeso neanoputika lasers, gonesa vavengi vako kufa, kana kungoshandisa pfuti inoridza mimhanzi yesimbi kana kuchema paunoishandisa nekuti wadii?
Kutsigira anosvika mana-mutambi co-op uye achiuya nemazhinji emaawa ezvemukati - kwete kana accounting yeinoshamisa DLC - zvinoita sekunge panenge pasingagumi zviyero zvemafaro kuve nazvo. Kana iwe uchibatanidza izvi neiyo chiratidzo siginecha pfungwa yekuseka uye hunyanzvi chimiro, unova unonakidza mutambo wekutamba kwese kwese.
Borderlands 3: Deluxe Shanduro
Misa mapatya eCalypso uye Vana veVault kubva pakutora iro renyeredzi uye nekuparadza mapuraneti. Tora pfuti dzako uye gadzirira kurwa kwehupenyu hwako.
Kudanwa kweDuty: Black Ops Cold Hondo
Taura zvaunoda pamusoro peKudaidzwa kweDuty akateedzana, asi Treyarch inoziva kugadzira yakanaka shooter. Iyo pfuti iri yechipiri kune imwe, uye Black Ops Cold War inoichengeta ichiwedzera pasi kupfuura zvimwe zvakapetwa zvakateedzana nekuzviisa mukati mema1980. Kuwedzera kune imwechete-mutambi mushandirapamwe, zvakare nyowani uye inodzosera vatambi nzira, pamwe neyakajairika Zombies modhi.
Yakatorwa nemumiriri wepamusoro kubva kuCIA, hunhu hwako hunoenda pachinangwa chekumisa mashandiro eRussia Perseus, munhu akavakirwa paspy yehupenyu chaihwo kuvepo kwake kunopikiswa nanhasi. Chero zvazvingaitika, iye chaiye muBlack Ops Hondo Yemashoko, uye Mutungamiri Ronald Reagan vanobvumidza mishoni iyo inokutumira iwe kutenderera pasirese kushandura kutyisidzira uku. Kuvimbika kwako kunozoedzwa mumushandirapamwe uyu.
Kudanwa kweDuty: Nhema Ops Cold Hondo PS5
$ 60 paWalmart
Gara pakati peBlack Ops neBlack Ops 2, Call of Duty: Black Ops Cold War inoita vatambi nekurwira nyika yavo kuitira kuti vadzikise kutyisidzira kweRussia uko neCold War. Nhanho yakanaka, musoja.
Rainbow Six Kutyisidzirwa
Rainbow Siege Kutyisidzirwa mutambo wevadzidzi vakawanda nemamepu akawanda anotamba uye modhi, pamwe nezviitiko zvemwaka, izvo zvinosimbisa kubatana pamwe nekuparadzwa kwezvakatipoteredza. Kunge Black Ops Cold War, kuridzwa kwepfuti pano kwakasarudzika. Zvisinei nemamiriro ezvinhu emutambo pawakavambwa, zvinonakidza kwazvo izvozvi uye unozvirumbidza makumi emamiriyoni evatambi, uchichengeta fanbase ichishanda uye ichiita.
Kana iwe uchida imwe single-player Gameplay, Rainbow Siege Kutyisidzirwa inopa gumi solo mamishini kuti iwe ugone kuzviziva iwe neanogadzira usati wasvetukira muvazhinji vatambi uye kutora dhongi rako rakapihwa kwauri. Uyu muenzaniso wemitambo-se-se-sevhisi yakaitwa nemazvo uye inofanirwa kunge iri pane chero runyorwa runyowani kutsvaga mupfura kuti atambe.
Muraraungu matanhatu Kukombwa PS4
$ 18 pa Best Buy
$ 19 paWalmart
Tom Clancy's Rainbow Six Kukombwa kwakasangana nekushoropodzwa kwakasimba pakuvhurwa - ndizvo chaizvo kune vamwe vanoona kushomeka - asi pamusoro pemakore zvakarima ruzhinji rwunoteedzera uye ruchienderera nekuisa zvemukati wakanaka.
Uraya masimba eGehena uye ubvarure uye ubvarure nzira yako kuburikidza nemazana - pamwe zviuru - zvemadhimoni muDOOM Eternal, kuteedzera kune zvinyoronyoro reboot yeakateedzana iyo id Software yakaburitswa makore mashoma apfuura. Ipo Pasi richikundwa nemauto emadhimoni, zviri kwauri seDoom Slayer kutora Hell Vapristi naKhan Maykr, munhu akaipa ari gehena akatsunga kuparadza vanhu vese.
Iyo Doom Slayer iri kupokana neyakajairwa arsenal yemaddies, zvimwe zvidhori zviso zvinodzoka pamwe chete nezvimwe zvitsva. DOOM Yokusingagumi inoisa tarisiro hombe pane inokurumidza uye frenetic Gameplay, inokurudzira vatambi kusundira kumberi uye kubvisa vavengi kuburikidza nechisimba chisimba vachiri zvakare kugadzirisa zviwanikwa zvavo. Pfuti dzaunadzo dzinobatsira, senge pfuti yekurwa neBFG 9000. Izvo hazvina kukukwanira? Kune zvombo zvemashure kunge macheni uye cheni inodzoserwa Doomblade, futi.
DOMO Rusingaperi PS4
$ 32 pa Best Buy
$ 44 paWalmart
Hapana chinhu chinogutsa sekushandisa pfuti yekurwa kuti uparadze masimba emadhimoni eGehena. Ndizvozvo chaizvo zvinopihwa neDOMO Eternal, saka tora pfuti yako yaunofarira uye tanga kubvarura vavengi vako kuita zvidimbu.
Destiny 2: Kupfuura Chiedza
Destiny 2 inogona kunge iine makwikwi emitambo yakawanda, asi chingwa chayo nebhotoro ndiyo PvE yayo Gameplay uye co-op. Kuwedzera kwayo kwechishanu kukuru, Beyond Chiedza, kwakawedzera kusimudzira chiitiko ichi, kupa vatambi basa kuEuropa kumisa kutyisidzira kuri pedyo neMufambi. Bungie akachekesa dzimwe pfuti nenzvimbo muBeyond Chiedza kuchengetedza saizi yekuisa pasi, asi inoronga kuitenderedza mukati nekubuda munzvimbo yayo yezvinhu.
Iyo yekuvandudza yePS5 inosanganisira yechokwadi 4K pa60FPS Gameplay, ine yayo Inorovedzwa multiplayer mode yakaiswa kune whopping 120FPS. Iwe ungatofanira kuitamba iyo wega kuti uone kuti yakanaka sei uye inoita sei zvakanaka, asi iri yepamusoro. Iyi inotevera-gen yekuvandudza zvakare yakawedzera iyo FOV inotsvedza, uye pane imwe nguva, Bungie achange achiwedzera muchinjikwa-kutamba muna 2021 kuitira kuti Xbox, PlayStation, uye PC vatambi vapedzisire vatamba vese pamwechete.
$ 40 paWalmart
$ 40 ku GameStop
Beyond Chiedza chakatora mutambo watove wakanaka kwazvo uye ndokuita kuti uve nani. Destiny 2 yakanaka pane PlayStation 5, inomhanya pa4K 60FPS pamushini mutsva waSony.
Akanakisa PS5 Multiplayer Mitambo
Kubhejera chiitiko chehukama kupfuura nakare kose, uye hapana chinoita kuti chionekwe sekukwira kwevatambi vakawanda. Kunyangwe iwe ugere padyo neshamwari pasofa kana uchitamba nemumwe munhu anobva kune imwe nyika, mitambo yevatambi vakawanda inounza vanhu padhuze pamwechete (kana ukasateedzera mamwe maTroll ane chepfu pane kutaura nezwi, asi ini digress). Multiplayer anogona uve simba rezvakanaka, rinobatanidza vanhu uye uchivatendera kuti vafare kana vasingakwanise kuenda kunze. Aya angori mashoma emitambo yakanakisa yevatambi vakawanda paPS5.
Haisi chete iyo Black Ops Cold Hondo mutambi asina chaanogona, asi inokodzera nzvimbo seimwe yemitambo yevatambi vakanyanya yePS5, futi. Zvekunaka sezvo Treyarch inogona kuita mushandirapamwe, vatambi vayo vazhinji vanogara vari moyo weKudaidzwa kweDuty. Nhema Ops Cold Hondo ine yakasarudzika nzira dzakawanda dzevadzidzi senge Team Deathmatch uye Kutonga, pakati pevamwe, vanotsigira 6v6 uye 12v12 Gameplay. Maitiro matsva anogona zvakare kutsigira vanosvika makumi mana vatambi. MuFireteam, iyo yambotaurwa 40-mutambi modhi, zvikwata zvina zvegumi zvinokwikwidzana zvichipesana kana kushanda pamwe chete kupedzisa zvimwe zvinangwa, zvichienderana nebasa.
Nekuti ndeye Kudanwa kweDuty mutambo, iwe unoziva mutambi mutambi achave ane hupenyu. Iwe haufanire kunetseka nezve kunetseka kuwana machisi kana chero chinhu chakadai. Kudanwa kweDuty mitambo iri pano kuti igare, uye Treyarch ichave ichiitsigira kwenguva yakareba inouya kudzamara inotevera Inoshevedzwa pabasa ikamuka.
Tamba mune yayo iconic Zombies modhi kana sarudza iyo nyowani Fireteam mamishini muChechi yeDuty: Black Ops Cold War. Chero zvazvingaitika, iwe unowana vamwe vevatambi vakanyanya kunaka iyi indasitiri inofanira kupa panguva ino.
Rainbow Siege Kukombwa inorarama uye inofa neayo akawanda vatambi, saka chinhu chakanaka Ubisoft inoramba ichichitsigira nemwaka mutsva yezviri mukati. Kune akatiwandei emamodhi anotenderera PvE uye PvP zviitiko, neimwe yeanonyanya kufarirwa kuve kweTerrorist Hunt uye anokwikwidza Hostage, Bhomba, uye Nzvimbo Yakachengeteka mamishini. Kune angangoita makumi matanhatu mavara anotamba, anonzi maOperator, mumutambo unounza hunhu hwavo nehunyanzvi kunhandare yehondo.
Tichifunga nezvekubudirira kwayo, Ubisoft haisi kunonoka neRainbow Siege chero nguva munguva pfupi. Iyo kambani yakazivisa mutambi kuverenga kuverenga makumi matanhatu emamiriyoni gore rapfuura, uye zvinongoita sekukura. Kupfuura kwayo kwegore kunowanzo sanganisira maOperator matsva, VIP perks, matehwe, giya, uye zvimwe.
Ubisoft's Rainbow Six Siege inonunura yakakwenenzverwa yevatambi vemitambo yakawanda nemwaka mutsva yezvinyorwa zviri kuwedzerwa gore rega. Izvo hazvitaridzike sekunge kune magumo ekuona chero nguva munguva pfupi, saka pinda muchiito.
Hapana kana chinhu chingamise kutonga kweFortite. Inoenderera imwe yemitambo yakanyanya kutariswa uye yakanyanya kuyeredzwa paTwitch, hapana kumira izvo Epic inogona kuita neyemahara-kutamba-kurwa royale. Iyo kambani inoramba ichichitsigira nehondo nyowani dzinopfuura uye mwaka wezviri mukati, ichivimbisa mamirioni evatambi kusvetuka zuva rega rega.
Hondo royale inokanda vatambi zana kuchitsuwa kunorwa uye kuve wekupedzisira munhu amire. Iyo ine pakarepo inozikanwa art chimiro uye inoramba ichibatana pamwe nemakambani senge Disney uye Warner Bros. kuunza nyowani yekuyambuka-pamusoro zviitiko, mavara, uye zvimwe. Firimu mugadziri Christopher Nolan akatekeshera imwe yemamuvhi ake mumutambo, uye Travis Scott akaita konzati. Icho chiitiko chetsika chakaunza vanhu vasingaverengeke pamwechete.
Fortnite (yemahara kutamba)
$ 32 (5,000 V-Bucks) kuAmazon
Iwe haugone kutaura nezvemitambo yevakawanda pasina kutaura Fortnite. Hondo royale yakashandura mitambo-se-sevhisi indasitiri, kune zviri nani kana zvakanyanya.
Kudonha Guys kwakashamisa vanhu vazhinji payakatanga paPlayStation Plus panguva yezhizha ya2020. Kusanganisa iyo hondo royale fomula nemitambo inoratidza seWipeout, Vanowira Guys vakakurumidza kutora iyo internet kwemwedzi yakati wandei. Ndiwo mutambo wakakwana wekutamba neboka reshamwari kana nevasingazive online. Ini ndinokuvimbisa kuti uchafara chero nzira.
Vanosvika makumi matanhatu vatambi mune yakanakisa fomu yezvinoratidzika kuva jelly bhinzi zvinokwikwidza mukuwedzera wacky uye zvakaoma zvipingamupinyi makosi kusvikira kwasara imwe chete. Uyo anokunda anowana korona inochiviwa, iyo inogona kuzoshandiswa kutenga zvigadzirwa mumutambo wemu-mutambo. Gadziriso Mediatonic yakaburitsa mwaka mishoma yezvakasiyana zvemukati zvakatove, imwe Medieval-themed uye imwe yenguva yechando. Nguva ichazongotaura izvo zvichaitika mune remangwana zvemutambo uyu, asi iri kutaridza kupenya.
Fall Guys: Yekupedzisira Knockout
$ 20 paPlayStation
Yakagadzirira mamwe memes makuru zhizha rino, asi Fall Guys inopfuura ipapo. Ichokwadi mutambo unonakidza wekutamba neshamwari nevasingazive zvakafanana. Zvino enda undotora korona.
Yakanakisa Mitambo yePS5 yeVana
Haasi ese mutambo ane mwana-ane hushamwari. Muchokwadi, ini ndaizobheja mazhinji eanonyanya kufarirwa kuburitswa kwezororo anowanzo kuverengerwa T kana M vakawanda vateereri vevakuru. Nekutenda kuchine zvakawanda zvekusarudzira iro boka diki kuti rinakirwe. Iyo PS5 yakatangwa nemimwe mitambo inoshamisa yevana, uye ini ndinongotarisira zvimwe nekufamba kwemakore. Hezvino izvo zvatinoona sevamwe ve mitambo yakanakisa yePS5 yevana.
Kubva kune vanogadzira kuseri kweOctodad: Dadliest Catch inouya Bugsnax, rimwe zany zita rinosvitsa vatambi kune titular Bugsnax zvisikwa. Chikamu chidimbu, chikamu chinonaka, zvisikwa izvi zvinofamba-famba zvichitenderedza Snaktooth Island zvakamirira iwe kuti utore uye utore. Izvi zvidiki zvinonaka zvinogona kuzopihwa maGrumpus emuno munzvimbo, zvichishandura zvikamu zvemiviri yavo zvichibva pane zvavaidya. Ehe, zvinotyisa semutambo wakanaka kudaro.
Pamusoro pekuisa zvinyorwa izvi zvisikwa, une chinangwa chechipiri chekufamba kuenda kuSnaktooth Island. Muongorori ane nzara Lizbert Megafig anoita kunge akashaika, uye zviri kwauri kuti uzarure zvakaitika. Vimba neni kana ndati ndeye mugove weirder kupfuura iwe zvaunogona kufunga, kunyangwe yemutambo unenge hafu-bhuru, mhuka dzehafu.
$ 25 paPlayStation
Rwendo rweSnaktooth Island uye unotora pamusoro pezana reaya akanaka / anotyisa chikamu bug, chikamu chezvisikwa zvekudya. Pane chakavanzika chakamirira kuti iwe uburitse, saka gadzirira kamera yako.
Imba yekutamba yaAstro
Astro's Playroom inoteedzana neiyo VR zita rekuti Astro Bot Rescue Mission, asi haufanire kunetseka nezve kuda VR headset kuti uitambe. Astro's Playroom imba yeplatformer inoreva kuratidzira kugona kweDualSense controller uye inouya isati yaiswa ose PS5 koni. Zvinotora mukana wakazara weiyo haptic mhinduro uye zvinogadzirisa zvinokonzeresa, zvichikubvumidza kuti unzwe zvechokwadi zviito zvako mumutambo, uchigadzira chiitiko chakanyudza kupfuura nakare kose.
Astro's Playroom inozadzwawo kune brim ne PlayStation chishuwo. Haisi yega yega nzvimbo dzayo ina dzakakosha dzinovakirwa pachikamu chePS5 (GPU Jungle, SSD Speedway, Colling Spring, uye Memory Meadow) asi zvikamu izvi zvakare zvine zvinhu zvakavigwa uye mazai eIsita kubva kukare kwePlayStation kunotora, senge mutungamiriri wePS3 uye zvimwe zvishandiso pamusoro pemakore.
Yemahara neese PS5 iAstro's Playroom, inonakidza chikuva inokoshesa iyo PlayStation nostalgia uye inoshanda seye tech demo yeanoshandura DualSense controller. Ukangonzwa izvo zvinokonzeresa, haugone kudzokera kumashure.
Sackboy: A Big Rwendo
Kunyangwe isina kugadzirwa neve LittleBigPlanet vagadziri veMedia Molecule, iyo yakabva yaenderera kuDoto, Sackboy: A Big Adventure yakakwanisa kutora akateedzana 'runako nekuda kwebasa reSumo Dhijitari. Sackboy ari kunakidzwa nenguva yake muCraftworld, asi kana iyo yakaipa Vex ichikanganisa rugare uye ichityisidzira kuparadza Craftworld nevanhu vese varimo, zviri kuSackboy kuchengetedza zuva.
Kusiyana ne LittleBigPlanet, iyo yainyanya kufunga nezve zvemukati-zvakagadzirwa zvemukati, Sackboy: A Big Adventure inoratidzira akawanda mazinga akagadzirwa naSumo Dhijitari. Izvi zvinogona kutambwa zvega kana nevatambi vanosvika vana mu co-op. Yedu Sackboy: Ongororo Huru Yekushanya akaidaidza kuti "iyo PlayStation vhezheni yeSuper Mario 3D World," iyo "inokodzera nzvimbo munzvimbo chero yemaraibhurari yevatambi."
Sackboy: Iyo Yakakura Yekutandarira PS5
$ 46 ku Amazon
Sackboy adzoka mupuratifomu itsva ye3D kuchengetedza Craftworld kubva kune yakaipa Vex uye yake Topsy-Turver muchina. Tamba kuburikidza nematanho mazhinji uye uwane mari yekuunganidza kuti ugadzire Sackboy mune dhizaini.
Akanyanya Mahara-ekutamba Mitambo paPS5
Mitambo inodhura, asi haifanire kunge iri. Iko kune yakazara katarogu yemahara-ekutamba mitambo paPS5, zvichireva kuti haufanire kubhadhara peni kuti uitambe. Kunyange ivo vachiwanzo sanganisira microtransaction yekutenga zvipoda uye mamwe magiya matsva, haudaro vanoda kushandisa chero chinhu pazviri. Kana iwe uri kutsvaga kuti ufare asi uri pabhajeti yakaoma, izvi ndizvo zvimwe zve mitambo yepachena yemhando yepamusoro paPS5.
Genshin kukanganisa ine yakakwidziridzwa yePS5 vhezheni padhuze neayo PS4 inodzokera kumashure inoenderana edition. Ichi chiito RPG chakaiswa mune yekufungidzira nyika yeTeyvat, kumusha kumatunhu manomwe anonamata vamwari vanozivikanwa seArchons. Mushure mekunge hunhu hwako hwabatwa muTeyvat, zviri kwauri kuti ubatanidzane nemapatya ako akatorwa nemumwe wevamwari, nguva yese iyi uchibatsira vanhu munyika dzese nemakakava avo.
Kunyangwe iri yemahara-kutamba, Genshin Impact ine gatcha makanika, nzira yekuita mari mutambo uye nekutsigira budiriro. Ini ndoziva microtransaction tsika inotyisa iyo vanhu vazhinji vanovenga, asi ivo havana kushata sekurira kwavo pabepa pano.
Genshin Impact inoshamisa yekufungidzira RPG iyo chero munhu anogona kutamba mahara paPS5. Kana iwe uchida kuedza rombo rako uye uwane mavara matsva uye giya, unogona kushandisa imwe mari pane ayo ma microtransaction.
Fortnite, kunze kwekuve mumwe weakanakisisa emitambo mitambo, zvinoitikawo kuva yemahara-kutamba. Yayo yehondo royale modhi inotambiswa nevanhu vanopfuura mamirioni zana, mazhinji acho anotenga mumagetsi ayo ekuchengetedza Epic ichipomba zvirimo. Zviri kupokana nekunakidza paunoshandisa imwe mari pazviri, asi sarudzo iripo yekuitamba mahara zvachose kana uchida.
Kusvika pamitambo-se-sevhisi ichienda, iwe unenge uchitarisa makore ekutsigira Fortnite kuti iuye. Epic inoziva yakarova goridhe pano, uye nehukama hwese pakati pemaitiro etsika mifananidzo, hapana kuidzora.
Tamba mumwe wemitambo inozivikanwa kwazvo pasi pasina kushandisa kana kobiri zvaro. Fortnite ndeyemahara-kutamba paPS5 uye mazhinji mamwe masisitimu, saka nothings inokumisa (kunze kwekunge fanbase yayo).
Ini ndakashamisika kuona Sony ichipa yemahara kurongedza-mune zita rinouya rakagara-rakaiswa pane yega PS5, asi zvine musoro. Astro's Playroom ndiyo yakakwana tech demo kuratidza izvo zvakagadzirwa neDualSense, uye ndizvo chaizvo mhando yekutanga kwekuratidzira iwe yaunoda kugadzira. Zviri pfupi - mashoma maawa chete - asi zvakakodzera nguva yako.
Medu Astro's Playroom ongororo, isu takati: "Haisi chete iyo Astro's Playroom inonakidza diki 3D platformer inoratidza kuti Astro ine chaiyo mascot kugona kweiyo PlayStation brand, asi zvakare iri yakanakisa demo yemutungamiriri weDualSense uye isina-brainer kurudziro nekuti ndiwo mutambo wekutanga chero munhu anofanira tamba pane yavo ichangovhurwa PlayStation 5. ”
Chaizvoizvo, zvese zvaunoda kuti uite kuti utambe mutambo uyu ndeyako PS5. Ndizvo. Yakagara yaiswa kare. Ingosarudza mutambo uye wakanaka kuenda.
Apex Legends ndiyo mhinduro yaAptawn kuna Fortnite. Panzvimbo pekurwa kusvikira munhu mumwe asara, Apex Legends unowanda mutambo wechikwata. Vatambi makumi matanhatu, mumwe nemumwe ari muzvikwata zvevatatu, vanozvirwisa neakasarudzika mavara ane avo hunyanzvi uye kugona kwavo. Kuita kuti itonhorere, yakaiswa mukati meiyo yakafanana sci-fi zvakasikwa seTitanfall, imwe chivakwa nemugadziri Respawn Varaidzo.
SaFortnite, Apex Legends inoratidzira ma microtransaction pamwe nehondo yekupfuura uye mwaka mutsva yezvinyorwa kuti uchengetedze ruzivo rwacho rutsva rwevatambi. Kana Fortnite isiri yako kapu yetii, Apex Legends inoshandura fomula yacho zvakakwana zvekuti ingangove yako hondo royale yesarudzo.
Apex Legends (yemahara kutamba)
Shanda pamwe chete neshamwari kuti mutore makwikwi muApex Legends. Iyi hondo royale gamba shooter inogona kupa Fortnite kumhanyisa mari yayo, kusanganisa iyo yakasarudzika fomula nenzira nyowani dzekutamba.
Kudanwa kweDuty: Warzone
Kwete kusara kunze kwehondo royale mafaro, Call of Duty ine yayo vhezheni, Kufona kweDuty Warzone. Vatambi vanosvika zana nemakumi mashanu vanogona kukwikwidza mumutambo, paine dzimwe nzira-shoma-nguva dzinobvumira vatambi mazana maviri kuti vapinde munhandare kamwechete. Nekuti iyi iri Call of Duty zita, unogona kubheja kuti ine imwe yeakanakisa kurira kwepfuti mubhizinesi, Warzone kuve inovandudzwa nemwaka zvayakanakira Infinity Ward.
Zvimwe kunze kwezita rayo uye magirafu ekuzvitsauranisa kubva pane zvinodairwa neFortnite uye Apex Legends, ndiyo inowanzoitika kurwa royale ine mepu inoderera. Izvo zvakanaka hazvo ndezvekuti zvinoratidzira-kutamba kana iwe ukapinda neActivision account, uchirega vanhu paXbox uye PlayStation vachitamba.
Tora chikamu mune imwe yeakakura muhondo royales kuti amboburitswa nevatambi vanosvika mazana maviri mumutambo mumwe chete. Izvo zvinowanzoita mhirizhonga, asi izvo zvinongovhura nyika nyowani nyowani yemikana.
Kana Destiny 2: Shadowkeep yaburitswa, mutambo wepasi wakaenda wakasununguka-kutamba. Kunyangwe inogona kunge isina zvakawanda zvirimo, uchiri mutambo wakazara une zvakawanda zvekuita. Kuwedzera kune yayo PvE zvemukati, iwe unogona zvakare kutamba multiplayer PvP muCrucible. Kuti uzviise zvakapusa: iwe unowana zvese zvaro zvegore-rimwe zvemukati uye zvimwe zvegore rayo maviri zvemukati. Hapana cheiro chegore-matatu zvemukati kana chero chinhu mushure chinosanganisirwa mune yemahara-yekutamba vhezheni.
Iyi inzira yakanaka yekupinda mukunakidzwa pasina kushandisa dhiza. Destiny 2 yakanga isiri muchimiro chakanakisa payakatanga, asi nerutsigiro rwekungogara Bungie akavaka hwaro hwakasimba hwekuwedzera mune ramangwana.
Destiny 2 (yemahara kutamba)
Suit up, Guardian. Iyi sequel kune Bungie's mythic sci-fi hit ikozvino yasununguka-kutamba, kuvhura nyika nyowani dzevatambi kuti vaongorore uye nekuunza kutyisidzira kutsva kuti vakunde.
Akanakisa PS5 Horror Mitambo
Inotyisa mitambo inouya mumhando dzese dzemhando uye saizi. Kunyangwe iwe uchitsvaga kwekutya kwepfungwa, maslasher, anoshamisa mashura, kana chimwe chinhu chiri pakati, iyo inotyisa genre inosanganisira mugove. Iyo PS5 haisati yaona mitambo yakawandisa yepamusoro-soro, asi ine vaviri panguva ino vakanyanya kunaka.
Mugari Evil Village
Mugari Evil Village yakaita mafungu paakatanga kuziviswa, zvishoma nekuda kwaLady Dimitrescu, uyo internet akamudaidza nerudo Yakareba Vampire Mukadzi. Nekudaro, iye anongova chikamu chimwe chete chemutambo muhombe, asi Capcom aiziva kushambadzira Village kurudyi. Iye nevanasikana vake vatatu vanogara vachikunyengedzeredzai pamuzinda, uye pane zvakawanda zvinotyisa kuti muve nazvo, asi icho chikamu chimwe chete ichocho.
Musha unotevera Ethan Winters mushure mezviitiko zveMugari Evil 7. Chris Redfield paanopinda muhupenyu hwake akaupidigura, Ethan anoenda kumusha usinganzwisisike weEuropean uko maLican, mavampires, nezvimwe zvisikwa zvisingaonekwe zvinotonga. Wongororo yedu yakati, "Resident Evil Village inotora zvese zvawakada nezve franchise ndokuzvibatanidza pamwe nekuremekedza kune zvekare uye zvemazuva ano zvinotyisa kuti ugadzire chakasiyana mumitambo yemavhidhiyo nhasi. Chinhu chinoshamisa chose, kuratidza kwakanakisa kweRejini nePS5 sebhonasi. ”
Mugari Evil Village - PS5
Vateveri veHorror vane chikwereti kwavari kuti vatambe Resident Evil Village paPS5. Iko kuwedzera kwakanakisa kune iconic dzakateedzana uye kunounza zvakawanda zvinotyisa, kunyanya mune imwe nhanho kunyanya.
Kudzosera yakashamisa munhu wese payakaburitsa. Kuuya kubva kuHomemarque, mugadziri weResogun, zvakaratidza kuti studio yacho yaigona kuita mitambo yesinema inomira kureba pakati peboka reAAA. Izvo zvirinani ndezvekuti zvinotora mukana uzere weiyo PS5 DualSense controller, ichishandisa yayo haptic mhinduro uye zvinogadzirisa zvinokonzeresa zvechiitiko chekubata.
Iyi roguelike inoratidzira nguva inguva apo iwe waunodzora astronaut uyo anopunzika pane isingazivikanwe mutorwa nyika. Zvakaoma zvineutsinye asi zvakaenzana seyekunaka uye kunakidza. Ingo chenjera nekuti ukangofa, unodzoserwa pakutanga. Yedu Yekudzokorora ongororo yakaidaidza kuti "mesmerizing musanganiswa wechiito uye kutyisa kwepfungwa;" imwe inouya yakazara nevanhu vasina roguelike Gameplay, inoshamisa nyaya, uye dzinoyevedza zvinoonekwa.
Roguelikes haisi yemunhu wese, uyezve haina Kudzoka. Asi kana iwe uri fan weiyo genre saka iwe unozobatwa kune yakanakisa - kana inotyisa - chiitiko. Rombo rakanaka.